Ona & ita | Shanyira Hultsfred
Ona & ita
musha » Ona & ita
Gravel gomo chikomo
Kana paine chando chakaringana, kune akatiwandei materu akasiyana akakwana kune tobogganing kana kumhanya kwechando. Pfeka mbatya dzinodziya, rongedza
Iyo Daisy Fence
Nhandare yeSilverdalen - nzvimbo yekutamba uye misikanzwa! Zvishandiso uye zvinokwezva Swings Combi inotamba Sandbox Barbecue nzvimbo yePicnic tafura (kugona kugadziriswa)
Tamba uchitenderera munhandare yaMörlunda - hezvino zvinhu zvinonakidza kuti uwane! Zvishandiso uye zvinokwezva Kukwira furemu Kukwira mutambo wevana vadiki Swings
Chikafu chakavakwazve nekurudziro kubva kune zvakasikwa nehuni nesango semusoro wenyaya uye wakagadzirwa nenzvimbo nyowani dzegirini, mwenje mutsva wakachengeteka, nzvimbo dzezviitiko sezviri nyore
Imba yekugezera yeVirserum
Imba yekugezera yeVirserum inzvimbo diki yekugezesa ine mudziva unopisa unoyera 12,5 x 6 metres. Dziva rine hudzamu kubva pa0,9 kusvika ku1,5 mita. 6
Denga rinotsika mhepo nenzira dzaro munzira diki dzine traffic shoma. Kana iwe ukasarudza kutenderera daro rese, unogona kutarisira makiromita 17 nemhando dzakasiyana uye
Hässlid Fomu Dhizaini Yekutengesa
Chitoro chiri padhuze neHotell Dacke muVirserum. Zvigadzirwa zvemuno nedunhu. Mhizha, basa remaoko, chimiro uye dhizaini. Matanda, machira, zvigadzirwa, makushe, magirazi uye zvimwe zvakawanda
Iyo loom iri padyo nenzvimbo yekupaka munzvimbo. Icho chimwe cheSweden chakakura kupfuura zvese. Iyo yekumira muVirserum yanga iriko kwemakore makumi maviri nematatu. Mune maviri pasi anowanikwa
Munzvimbo yeKambani mune gadget yakanaka kwazvo yemiriwo ine zana nemakumi mashanu emakwenzi akasiyana, maruva ezhizha uye zvinogara.
Kugamuchirwa kutenderedza mbichana Flaten - Gårdveda. Chiitiko chinoyevedza chinoenderana nemhuri yese. Pane chiteshi chaFlaten uchawana dressage yekuchovha bhasikoro, heino mota park uye
Chinhambwe kure kure kwete kure nekereke yeMörlunda inovanza dura rakazara nezvinhu zvakawanda. Pano iwe unowana midziyo yemumba, fanicha, zvinhu zvekare, mabhuku nezvimwe. Iwe
Lasse-Maja Cave kana Stora Lassa Kammare ine inonakidza nyaya yekutaura. Mubako iri, vanhu vari mumusha weKlövdala vakatsvaga utiziro kubva kumaDanes mu1612
Tanga Rwendo rwekuwana!
Kunge ngano, iyo inotenderera nzvimbo inopararira pamusoro pekuchamhembe kweSmåland. Dense paini sango rakapindirwa nemiti yakanaka uye makungwa anopenya uye anotaridzika maonero. Ona nzvimbo
Hagadalsparken akagashira kwekusimudzira chaiko pamusoro pegore rapfuura uye izvozvi zviri kuwanikwa uye zvakachengeteka kupfuura pakutanga. Dziva rine chakagadzirwa
Kutora mifananidzo uye ekare maitiro ekutora mifananidzo Geertjan Plooijer nyanzvi yekutora mifananidzo / muimbi. Anobva kuchamhembe kweFriesland muHolland asi anogara uye anoshanda muMörlunda. Iye
Björnnsssslingan isango chairo remashiripiti nemapine ekare anomira akakomberedza mabwe akafukidzwa nemucheka. Björnnäset yemhando yekuchengetedza iri pa
Pachikomo chidiki, chine maonero akanaka, mumusha weTälleryd kunze kweVena pane purazi Nybble. Mune yakanaka Lillstugan, hunyanzvi hunoyerera muSteve Balk's studio studio.
Akazvarwa 1950. Akadzidza zvemagariro. Akatanga kupenda zvine hushamwari mukati memakore mashoma achigara muTanzania (1995-1997). Paints kunyanya mune acrylic. Zvese zvinhu kubva kumamiriro ekunze kusvika kune reindeer
MuJärnforsen, kune netiweki yenzira dzinoyevedza dzekufamba musango, dzose dzinotangira kunze kwenzanga chaiko. Pakutanga pane
Sangano reSmalspåret Växjö-Västervik rinomhanya nezvitima paSmalpåret pakati peVirserum neAseda. Unonzwa kunzwa kwekukwira iyo yechinyakare orenji-yero njanji mabhazi anofema makumi mashanu. Nakidzwa
Tjustbygdens Järnvägsförening anomhanya nezvitima paSmalpåret pakati paHultsfred naVästervik. Ziva rwendo rwechitima kubva pane zvakapfuura. Iyo XNUMX km yakareba kosi inonzi inovakwa chivakwa. Iyo nzvimbo
Hultsfred yemunharaunda nhoroondo paki
Mune paki yakanaka paLake Hulingen mune Hultfred yemunharaunda nhoroondo yepaki. Pedyo chaipo pane Folkets park, nzvimbo yemitambo uye musasa. Mushure mekudzikiswa kweLake Hulingen muna 1924 pakanga paine
Målilla Gårdveda Hembygdspark ndeimwe yemapaki makuru emunyika yeSweden. Zviitiko zvinoitika pano gore rese uye iyo paki iri kuramba ichiwedzerwa nezvitsva zvitsva. IN
Kumba Kunotapira Hultsfred - mubatanidzwa, mutambo Chiratidziro chinotaurira nyaya yeCommunity Rockparty uye iyo Hultsfred Mutambo. Chiratidziro chiri mukamuri yeKlubben mukamuri repasi reValhall mu
Iyo nyaya yeSweden inonyanya kuzivikanwa mimhanzi mutambo! Nhau, mapikicha uye mafirimu mafirimu kubva mudura remumhanzi Iyo Swedish Rock Archive ikozvino yashandurwa kuita nzira yekufamba yekufamba pane yakasarudzika festival nyika pamwe